UPHUHLISO LWE-GTA 6 LUBONAKALA LUQINISEKISIWE YIROCKSTAR'S RETURN RETURN RETURN, AMATHUBA, UHLAZIYO LWAMVA NJE, ELINYE IXESHA LOKUGQIBELA? - IMIDLALO
Uphuhliso lwe-GTA 6 olubonakala luqinisekisiwe yiRockstar's Return Return Return, ezinokwenzeka, uHlaziyo lwamva nje, elinye ixesha lokugqibela?
I-Grand Theft Auto yenye yezona zinto zithengisa kakhulu kwihlabathi liphela. Kuyachulumancisa kwaye kuyacaphukisa
bazebelayo abazenzekela ngokwabo abalungile yenye yemidlalo yevidiyo ethengiswa kakhulu kwihlabathi liphela. Iyachulumancisa kwaye inomsindo ngaxeshanye. Ngophuculo kwimizobo yayo, yenza ukuma kwayo phakathi kweyona midlalo ithandwayo kwihlabathi liphela.
I-GTA 5 ibe yimpumelelo enkulu, esenza siqiniseke ngokuza kwendlela yayo elandelayo, okt i-GTA 6. Sonke siyazi ukuba sifumana i-GTA 6 kwaye kubonakala ngathi sifumana isiqinisekiso ngakumbi !! Funda inqaku kude kube sekupheleni ukuze ufumane!
I-Grand Theft Auto 6 yenye yezona zilindelekileyo kwimidlalo yevidiyo kulo nyaka. Abadlali beGamers bayayithanda i-GTA njengathi, kwaye ngekhe silinde ukukhutshwa okutsha!
Ukuqinisekiswa kwe-GTA 6 yiRockstar!
I-Rockstar North ngumyili wothotho lweGrand Theft Auto. Kutshanje, safumana iindaba malunga nembuyekezo yakhe yerhafu!
Ngoku, abantu abayikrwempi intloko ukuba usengowasesifundeni kwicandelo lerhafu kunye nembuyekezo. Silapha ukukunceda.
Ngokwe-TaxWatch yase-UK, i-Rockstar isandula ukupapasha ii-akhawunti zayo zamva nje ityhila ukwanda okukhulu kwamabango oNcedo lweMidlalo yeRhafu. Ke, bafake isicelo sokuhlangulwa kwirhafu. Kwiingxelo zabo, babanga isixa esikhulu seerandi ezingama-37.6 yezigidi zerhafu phantsi kweNgxowa-mali yokuNcedisa iRhafu yoMdlalo weVidiyo.
Eli nani likhulu lenzelwe uGrand Theft Auto 6. Kwaye iTaxWatch yase-UK iqinisekile ukuba isixa esipheleleyo siya kwi-GTA 6.
Bakhankanyile kwingxelo yabo ukuba bazibandakanyile izizathu zokuba bacinge njalo, uhlalutyo olusemva kwayo, kunye nembuyekezo yerhafu yeRockstar North eyadlulayo.
Akunjalo ngokungathi besingazi! Nangona kunjalo, ukuqinisekiswa okungakumbi kwamkelekile. Kwaye andiboni mntu ukhalazayo, duh!
IRockstar North ayichazanga Umhla osemthethweni wokukhutshwa komdlalo ukusukela ngoku. Kodwa, ngokutsho amarhe, GTA 6 uza kukhululwa kungekudala. Kwaye ezinye izindlu zosasazo zixela ukuba iRockstar inokuthi 'icinezelwe' ukuyikhulula kungekudala!
Singenile ngo-2020. I-GTA 5 yakhutshwa emva ngo-2013. Ingaphezulu kwesithuba seminyaka esi-7 esijonge kuso. Leliphi ixesha elininzi lokuphuhlisa uthotho lwemidlalo yevidiyo?
Ngokunokwenzeka kakhulu ekupheleni kuka-2021 okanye ekuqaleni kowama-2022, sizakufumana iGrand Theft Auto 6.
Kude kube ngoku, sine-GTA 5 yokudlala, iidrama!
Eyona drama ibalaseleyo yesi-2019
ngongcwalazi ezinzulwini zobusuku
iziqendu ezili-10 eziphezulu zekhitshi ezothusayo
Ixesha elite 3 iposta
cula umhla wokukhutshwa 2
Ixesha labaphambukeli 3